အမေးအဖြေများ - တစ် Plus အားကုမ္ပဏီလီမိတက်
ပလပ်စတစ် Shaker Bottle သ
stainless Shaker Bottle သ
BPA (အနည်း A) ကို fetuses, မွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များမှဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ထားတဲ့ပုလင်းအပါအဝင်အများအပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလတ်စတစ်, အောင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ကာဗွန်အခြေစိုက်ဒြပ်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝ! ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်တစ်ရည်မှန်းချက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအတွက် BPA ကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, မိသားစုမဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်အန္တရာယ်-အခမဲ့ထုတ်ကုန်များပေးနေပါသည်။
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အိတ်၌သင်တို့၏ shaker ယိုစိမ်စိုးရိမ်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုအာမခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ shakers ၏ lids နှင့်ထုပ်အပေါငျးတို့သပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာဖျံကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါဟာအများအပြားအဆင်းအရောင်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အဓိကအသုံးပြုပုံနှိပ်ခြင်း၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလိုဂိုနှင့်အတူတစ်ဦးကပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အရှည်ဆုံး-တည်တံ့နဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အအောင်, ပုလင်းပေါ်သို့တံဆိပ်ခတ်အပူဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုအရောင်များဟာပုလင်းနှင့် lids သင်စေနိုင်သနည်း
သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်မဆို color ကိုကျနော်တို့က၌သင်တို့၏ပုလင်းနှင့် lids စေနိုငျပါသညျ! ကိုယ့်ကို Pantone အရောင်ကိုသိကြကုန်အံ့။
ငါ shakers အပေါ်မှာငါ့လိုဂိုထားနိုင်သလား?
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပါ! သင့်ရဲ့ shaker ပုလင်းပေါ်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုလိုဂိုထားပါ။
81 Zhennan လမ်း, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
Plastic Water Bottle, ပရိုတိန်း Shaker Bottle သ, Shaker Bottle သ, အားကစားရုံဘူး, Shaker Cup, ပလပ်စတစ် Shaker Bottle သ,